Maalinta: Diseembar 26, 2018
Shaqaalaha IZBAN waxay sii wadaan Greve
10 ee İzmir Maalintii 16 ee İZBAN shaqo-joojinta oo billowday Diseembar, loo shaqeeyuhu wuxuu la xiriiray shaqaalaha. Maamulka IZBAN wuxuu ku dhawaaqay in isku-dheelitirka sicirka mushaharka ugu yar uu yahay dalabkii ugu dambeeyay ee 26 lagu dhawaaqay. İZBAN shaqaalaha [More ...]
Shilalka Gawaarida ee Niigde, 1 Dhimasho 1 Dhaawacmay
Isgoysyada Maareynta Gaarka ah ee Niğde ayaa ka dhacay shilalka heerka isgoyska ah ka dib markii tareenka xamuulka qaada uu ku dhacay baabuur ganacsi oo fudud, hal qof ayaa si xun u dhaawacmay hal qofna waa ku dhintey. Clock-ka heerka isgoyska Isgoyska Talada Gaarka ah [More ...]
Iyaga oo ka shaqeynaya sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen qanacsanaanta macaamiisha, MOTAŞ waxay sii wadaysaa inay nadiifiso faahfaahsan iyo sidoo kale nadiifinta gawaarida si loogu qaado rakaabka jawi nadiif ah oo nadaafad badan. kasta [More ...]
Naadiga Kaabayaasha Nidaamka Raadinta ee Jaamacadda Karab Studentsk waxay abaabuleen safar farsamo oo loogu talagalay BURULAŞ. Ardayda Naadiga Nidaamka Tareenka ee Jaamacadda Karabük waxay bartaan sida shaqaalaha BURULAŞ u shaqeeyaan, dhibaatooyinka ay la kulmaan iyo sida ay u shaqeeyaan si ay u bartaan xirfaddooda gudaha. [More ...]
Xisbiga AK Parti oo ah Ku-xigeenka Ergada Esgin
AK Party Bursa ku xigeenka Dr. Mustafa Esgin, 180 shaqo maalinle ah oo la socota qorayaasha munaasabadda ayaa ka hadlay tababbarka ugu dhakhsaha badan. Intii hawsha lagu gudajiray, Kızıl Kızılcahamam, oo booqday goobta dhismaha, wuxuu la xiriiray Maareeyaha Guud ee TCDD, [More ...]
Koorso bilaash ah oo ka socda Denizli
Isdiiwaangelinta koorasyada barafka ah ee bilaashka ah ayaa ka bilaabatay Xarunta Denizli Ski Center, oo ay hirgalisay Dawladda Hoose ee Magaalada Denizli oo dhowaan dhahday "Sannad wanaagsan. Dowladda Hoose ee Magaalada Denizli, Denizli Ski Center halkaasoo lagu geeyay adeeg [More ...]
Maqnaanshaha Badbaadinta Gaadiidka Badda Casriga ah ee Antalya
Waaxda Antalya ee Dawlada Hoose ee kooxaha Caafimaadka Deegaanka, wasakhaynta badda ee ay sababtay markabka Bahama ayaa xaday ganaax lacageed oo dhan 479 kun oo 600 ah. Kontroolka Ilaalinta Deegaanka ee Dowlada Hoose ee Antalya [More ...]
Kharashka Maalgashiga Dawlada Hoose ee Magaalada Muqdisho
Dawlada Hoose ee Konya, barafka joogtada ah ee magaalada oo dhan saameeya nolol maalmeedka degmada 31 ee qaybaha masuuliyada saacadaha 24 ee shaqada joogtada ah. Inta lagu jiro barafka culus, muwaadiniintu waxay la kulmaan wax kasta oo dayac ah [More ...]
Warbixinta Maalinta Hore ee Izmir ee ka soo horjeeda Snow
Dhexgalka gobollada saameynta ku yeeshay barafka ilaa fiidnimadii xalay ee Ismarka Magaalada Metropolitan, seddex meelood oo barafka lagu daadsho iyo cusbo lagu daadinayo gawaarida ayaa dhameystirtay shaqadooda xaafada 50. Kooxaha Magaalada, waa suurto gal waxgal ah [More ...]
Koorsada Nidaamka Isgaadhsiinta ee laga soo bilaabo Sivri iyo ardayda AKU
Jaamacadda Afyon Kocatepe (AKU) Ardayda Dugsiga Farsamada Afyon, TCDD Afyonkarahisar 7. Wuxuu booqday Agaasime Goboleed. Barnaamijka Teknolojiyada Wadada ee Ardayda ee koorsada Aqoonta Tareenka Nidaamka Tareenka [More ...]
Loo-shaqeeyaha oo Boos-u-jeedin loogu talagalay Maalinta 17 ee IZBAN Strike
Kadib shaqo joojinta ay bilaabeen shaqaalaha İZBAN oo aan heli karin shaqadii ay u baahnaayeen wadahadaladii gorgortanka wadareed ee (TİS) ee ka dhacay İzmir, dalab cusub oo kor loogu qaadayo ayaa ka yimid maamulka İZBAN. Sida shaqo-joojinta ay ka bilaabatay İZBAN waxay gashay maalinteeda 17, loo shaqeeye cusub [More ...]
Xisbiga Jamhuuriga ee Xisbiga (CHP) Istanbul Istanbul Sezgin Tanrık CHlu, CHP 26 kuxigeenka ayaa saxeexay 13 qof dhintey bishii Diseembar 9 qof oo ku dhintay Ankara-Konya High Speed ​​Train (YHT) dayacaada dhacdada iyo dayaca. [More ...]
Erciyes Inc. 'Hadda waxaad tahay qof aan la dulqaadan karin' tartanka isweydaarsiga ee u dhaxeeya Peers
Kayseri Erciyes Inc. oo leh hal-ku-dhigga 'Hadaadan u dulqaadan karin' oo ah ujeedada lamaanaha isqaba, xiisaha, hamiga, madadaalada ayaa wada joogi doona. 30 Diseembar 2018, 27 Janaayo 2019, 24 Febraayo 2019 [More ...]
The Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) iyo ogeysiis cusub waxaa la daabacay by "loo shaacin oo sabab u ah imtixaanka afka ah la qaadi doonaa si shaqaalaha Hay'adda our" ayaa lagu yiri bayaanka. In ogaysiin sii daayay by Tareennada State ee Jamhuuriyadda Turkiga, Ururkeena waxaa loo geyn doonaa goobo shaqo [More ...]